Durig's - Dog of the Dow - အမြတ်အစွန်း ၄.၈% ဝင်ငွေရှိသည် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B4.8B စျေးကွက်သတင်း
Durig's - Dogs of the Dow - အမြတ်ငွေ ၄.၈% ဝင်ငွေရှိသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 3, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, အဆိုပါ Dow 2020 ၏ခွေး, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
ရေ သူ့ကိုယ်ပိုင်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကို dynamically အလေးချိန်တီထွင်ခဲ့သည် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ.
Durig သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအထွက်နှုန်းရှိသောကုမ္ပဏီများကိုကျော်တက်ပြီး၎င်းသည် Dowt ၏ Dogs သည်သိသိသာသာမြင့်သောအထွက်နှုန်းကို Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှနှင့် Dow ၏ Dogs မှရရှိသည်။ Durig ရဲ့ Dow ၏ခွေး တစ်ဖလားကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောလက်ရှိဖြစ်ပါတယ် 4.87% .
အကောင်းဆုံး ၅ နှစ်စီဒီစီသည် ၁.၆၀% ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Dow ၏ Durig Dogs ကို ၄.၈၇% ရှိသည်။
Durig.com အပါအဝင်များစွာသော Dogs ကိုတွင်လည်းစီမံခန့်ခွဲ အဆိုပါ Dow ၏ခွေး.
သင်သည်အပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာစွန့်စားမှုနှင့်တိုးတက်မှုအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ Dow ထက်သာလွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအတွက် ၁၀ နှစ်ဘဏ္treာရေးထက် ၄% ပိုများသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကုမ္ပဏီများအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသောအရည်အသွေးဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုဒီအစဉ်မပြတ်အလွန်ကောင်းသောမြတ်များနှင့်အတူအပြာ chip ကိုစတော့ရှယ်ယာ 10 အစုစုကိုပြန်လည်ချိန်ခွင်လျှာထားပြီးဒါပေမယ့်ဘယ်လိုသူတို့ဖျော်ဖြေကြပြီ Durig ရဲ့ Dow ၏ခွေး 2020 ၏ပထမသုံးလပတ်နှင့်တစ်သက်တာအတွက်အရောင်းရဆုံးအတွက်နှစ် ဦး စလုံးဟာ Dow သာလွန်ခဲ့သည်။
ယင်းကြောင့်, Durig ရဲ့ Dow ၏ခွေး သုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ညီမျှခြင်းသည်၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးအမြတ်များကိုအမြဲရရှိနိုင်စေရန်ကူညီပေးသည်။
စျေးကွက်ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ခြေနှင့်နီးစပ်ကြောင်းညွှန်ပြပေးခြင်းပေးခြင်းနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုအလွန်ဝင်ငွေအပြာချစ်ပ်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။ Federal Reserve နှင့်အတူလူများသည် ၀ င်ငွေကောင်းသောဝင်ငွေရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲသောနေရာသို့အတိုးနှုန်းများနှိမ့်ချပြီးထိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်မြင့်မားသော ၀ င်ငွေပြန်အမ်းငွေရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားသောစွန့်စားမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယူရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ၀ င်ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ဆန္ဒရှိခြင်းသည်တိုးတက်မှုကိုရရန်အတွက်ရောင်းရန်သို့မဟုတ်အပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာများမှ ၀ င်ငွေတိုးမြှင့်ရန်အမျိုးမျိုးကွဲပြားသောကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်ဆန္ဒရှိခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Dow တစ်သက်တာစွမ်းဆောင်ရည်၏ Dogs ကို:
နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်: .50 သို့မဟုတ်လေးပုံတပုံနှုန်း၏ 1/8 ။
About ပျမ်းမျှခွဲဝေမှုအထွက်နှုန်း - ၄.၈၇%
Durig's Dow Portfolio မဟာဗျူဟာသည်အောက်ပါသက်သေပြထားသောနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုသည်။
Dow Weighting ၏ Dogs:
ဤသည်ခွေးအစုစုကိုပိုမိုမြင့်မားမြတ်များပေးဆောင်ကုမ္ပဏီများနှင့်, တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ကြောင်း, စတော့ရှယ်ယာအလေးချိန်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ကိုအသုံးချ။
Dow Trading ၏ခွေးများ
Dow ကုန်သွယ်မှု၏ Dogs အားလုံးသည်ကော်မရှင်အားလုံး၏ ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Dow Re-balancing ၏ Dogs:
လေးပုံတပုံတိုင်းသည် Dow အစုစု၏ Dogs ကိုပြန်လည်မျှတစေသည်။
Durig ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွေး မကြာခဏအုပ်စုတစ်စုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရာထူး ၁၀ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်မျက်နှာသာပေးမှုမရှိသောအထွက်နှုန်းများစွာရရှိသည်။
Durig သည်သင်၏ ၀ င်ငွေလိုအပ်ချက်များကို Transparent Fiduciary Services မှတစ်ဆင့်ဖြေရှင်းပေးခြင်းကိုအဓိကထားသည်။
ခွေးများတွင် ၀ င်ငွေမှာ ၀.၅၀% သာရှိသည်
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခု - ။
Dow of Dow ၏ခွေးများကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းစေရန်ပံ့ပိုးပေးသည် -
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထိန်းသိမ်းသူအဖြစ် Charles Schwab ၏ US တန်ဖိုးနည်းသောပလက်ဖောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောစာရွက်စာတမ်းများကိုရိုးရှင်းသောအီးမေးလ်တစ်စောင်နှင့်အတူသင်နှင့်အတူလုံးဝစာရွက်စာတမ်းများဖြင့်ပံ့ပိုးပေးသော e-document ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေသည်။ ကုန်ကျစရိတ်အလွန်နည်းပြီးမကြာခဏကုန်သွယ်ရေးအခကြေးငွေလုံးဝမရှိခြင်း။ ဤကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုး ၀ င်ငွေဖောက်သည်များအတွက်သာလွန်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
သင်၏ Charles Schwab ၏အကြံပေး Durig's Dogs နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းပါ
ငါတို့အောင်မြင်တယ် Durig ရဲ့ Dow ၏ခွေး သီးခြားအကောင့်များမှတဆင့်အခြား Charles Schwab သို့မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးများသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဗျူဟာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည်အခြေခံကျသောအချက် ၅၀ အတွက်အလွန်နိမ့်သောကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပြီး RIA သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုသူတို့ယုံကြည်သောအပိုဆောင်းအခကြေးငွေကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
အခြား Durig Dogs Portfolios:
အပြာရောင် Chip ခွဲဝေမှု အများပိုင်သတင်း တစ်ခါတစ်ရံဝင်ငွေခွန် မြတ်နိုးသူအရစ္စတိုတယ် မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ပိုင်းခြေဝင်ငွေခွန် မြတ်များထိတ် ခွဲဝေအထွက်နှုန်း ခွေး ကနေဒါခွေး ဥရောပ၏ခွေးများ အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ ရေ Durig Capital ကို Durig Fixed ဝင်ငွေ durig.com Fixed ဝင်ငွေခွန် ပုံသေဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြင့်မားသောမြတ်များအထွက်နှုန်း ဝင်ငွေ aristocrats ဝင်ငွေနည်းဗျူဟာ ဝင်ငွေစီး
ပတ်ပတ်လည်ကပ်ကပ် Epoxy ဗဓေလသစ်စျေးကွက်
IRS မှ Coronavirus နှင့်ဆက်စပ်သောလိမ်လည်မှုများ - စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအစီအစဉ်များကိုသတိထားပါ (IR-2020-64)
အဝတ်အထည်များ ၀ ယ်ပါ - လက်ကားနှင့် B2B ဈေးတွင်ဈေးချိုသောခေါင်းဆောင်